Qaxooti Mozambique ah oo u cararay Malawi….. | Saxil News Network
Qaxooti Mozambique ah oo u cararay Malawi…..
Musanbic (Saxilnews.com)-Boqolaal reer Musanbiik ah, oo ka baxsanaya dagaallada u dhaxeeya dowladda dalkaasi iyo mucaaradka RANEMO, ayaa u qaxay dalka Malawi ee la dariska ah Musanbiik. Sida uu ku waramayo wariyaha saxilnews moh hzzan, tiro badan oo ka mdi ah barakacayaasha ayaa hadda kusii qul qulaya xeryo qaxooti.
Madaxa tuuladaasi William Michiwem, ayaa saxilnews u sheegay in tuuladiisa ay marti galineyso hadda 775 reer Musanbiik.
Wuxuuna yiri, “Waa rag, haween iyo caruur. Laakiin waxay ku nool yihiin xaalad adag, waxa ugu weynna waxay tahay cunno la’aan iyo adeegyada aasaasiga ah ee nolol maalmeedkooda.”
“In ka badan 119 oo iyaga ka mid ah, waxa loo diiwan galiyay qaxootinnimo, waxaana loo sii gudbiyay xerada Luwani, halkaas oo ay dowladda Malawi oo taageero ka heleysa UNHCR iyo WFP ay ku sooreyso.” Lapozo, ayaa sidaasi yiri.
Qaar ku nool guryo si KMG ah loo sameeyay gudaha deegaanka (Kapise Laba), ayaa toddobaadkan inkirey inay yihiin reer Musanbiik. Waxay saxilnews u sheegeen inay kaliya soo booqanayeen saaxiibbo reer Musanbiik ah, kuwaas oo markaasi ku maqnaa shaqooyin.
Wuxu yiri, “Waxan u arkaa inay la mid yihiin sida dad ka madax bannaan ruuxaanta, waa ay diidayaan marka aad weydiiso inaad u kaxeyso xeryaha. Waxay dareemayaan in la xannibaayo.
Mid ka mid ah dadka tuulada, ayaa saxilnews u sheegay in qaxootigaasi aanay doonayn inay aad uga fogaadaan guryahoodii ay ka sootageen ee Musanbiik.
“Waxan dowlad ahaan sameynay waxa weeye, inaan u sheegno iyaga inaan u gudbin doonno goob cusub. Marka kuwa ogolaada inaan wadno, ayaa ah kuwa aan hadda kaxeyneyno. ” Chisamale, ayaa sidaas yiri.